Izindaba - Ukuhlaziywa kwesimo sokungenisa nokuthekelisa embonini yezingubo zaseChina ngo-2020
Ukuhlaziywa kwesimo sokungenisa nokuthekelisa somkhakha wezingubo waseChina ngo-2020
Njengezwe elikhulu lokuthekelisa izingubo, inani lokuthengwa kwezingubo lonyaka laseChina lidlula izigidigidi eziyi-100 zamadola aseMelika, okuyinto enkulu kakhulu kunenani lokungenisa izingubo. Kodwa-ke, ngokuguqulwa kwesakhiwo sezomnotho saseChina eminyakeni yamuva nje, imboni yezingubo iye yathenga kancane kancane yaya esikhathini esivuthiwe, futhi izinhlobo zamafilimu ziyaqhubeka zithuthukiswa, ukuthengwa kwezimpahla zokungenisa kanye nokuthekelisa okuthekelisa kweChina kuya ngokuya kuncipha. Ngo-2018, inani lokuthekelisa lezimpahla zokugqoka zaseChina kanye nezesekeli kwakungu-157.812 billion amadola aseMelika, kanti inani lokungenisa lalingu-8.261 billion dollars wase-US.
I-China yizwe elikhulu lokuthekelisa ngezingubo, kepha insalela yokungenisa nokuthumela ngaphandle incipha kancane kancane
Njengezwe elikhulu lokuthekelisa izingubo, inani laseChina lonyaka lokuthumela impahla ngaphandle lidlula izigidigidi eziyi-100 zamadola aseMelika, okuyinto enkulu kakhulu kunenani lokungenisa izingubo. Kodwa-ke, ngokuguqulwa kwesakhiwo sezomnotho saseChina eminyakeni edlule, imboni yezingubo iye yangena kancane kancane esikhathini esivuthiwe. Ngemuva kokuthi imikhiqizo enhlobonhlobo icebiswe kancane kancane, insalela yokungenisa nokuthekelisa yezimpahla yaseChina iyehla kancane kancane.
Ukusuka ngonyaka wezi-2014 kuya kowezi-2020, isikali sokuthekelisa impahla eChina siya ngokuya sincipha. Ngokwezibalo zeGeneral Administration yamasiko, ngonyaka we-2018, inani lokuthunyelwa ngaphandle kwezingubo zokugqoka nezesekeli zaseChina kwakungu-157.812 billion US dollars (eliguqulwe ngezinga elijwayelekile lokushintshaniswa kwedola laseMelika elilingana ne-RMB), unyaka nonyaka ukwehla kuka-0.68%; kusuka ngoJanuwari kuya kuMeyi ka-2020, inani elithunyelwa ngaphandle kwezingubo nezesekeli zaseChina lalingu-US $ 51.429 billion, ukwehla konyaka ngonyaka ngama-7.28%.
Kusukela ngo-2014 kuya ku-2020, isilinganiso sokungeniswa kwezingubo eChina sikhule ngokushesha. Ngokwezibalo zeGeneral Administration yamasiko, ngonyaka we-2018, inani lokungeniswa kwezingubo nezingubo zokugqoka zaseChina laliyizigidi eziyizinkulungwane ezingama-8.261 zamaRandi aseMelika, ukwanda ngo-14.80%; kusukela ngoJanuwari kuya ku-Ephreli 2020, inani lokungeniswa kwezimpahla zokugqoka zaseChina kanye nezingubo zokugqoka lalingama-dollar ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-2.715, ngokunyuka konyaka nonyaka nge-11.41%.
Izindawo eziyinhloko ezithunyelwa ngaphandle embonini yezingubo zaseChina yi-European Union, i-United States, i-ASEAN neJapan. Ngo-2018, inani lezingubo zokuthumela eChina e-EU lafinyelela kumaRandi ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-33.334, kwalandela i-United States neJapane, kanye nathi ngo- $ 32.153 billion no-US $ 15.539 billion ngokulandelana. Ibhande elilodwa, umgwaqo owodwa, indawo ehamba phambili yokuthekelisa. Ukuthambekela kweminyaka yamuva nje ukuthi ukuthunyelwa kwezimpahla zaseChina e-United States naseJapane sekuphinde kwaqala ukukhula, kwanciphisa ukwehla kokuthunyelwa kwamanye amazwe kwe-EU, nokwandisa umthamo wokuthekelisa kwamanye amazwe eceleni kwebhande nomgwaqo. Ngo-2018, ukuthunyelwa kweChina eVietnam naseMyanmar kukhuphuke ngaphezu kuka-40%, kanti ukuthunyelwa eRussia, eHong Kong, eChina nase-European Union kwehle ngo-11.17%, 4.38% no-0.79% ngokulandelana.